Medical Engineering - Luoyang kokuzihlanganisa Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
Ukuze yabo-X-ray imishini nekhompyutha tomographs, abakhiqizi idivayisi wezokwelapha babeka ithemba labo anodes yethu umile futhi-X-ray Okuqondiwe eyenziwe TZM, MHC, Alloys tungsten-rhenium futhi tungsten-ngethusi. tube futhi umtshina yethu izingxenye, isibonelo ngesimo rotors, izingxenye ebizwa, cathode eyesifunda emitters CT collimators futhi shieldings, manje ingxenye sima siqine ka imaging ubuchwepheshe besimanje zokuxilonga.
-X-ray emisebeni kwenzeka uma electron kuthiwa decelerated ngesikhathi anode. Nokho, 99% of the energy okokufaka iguqulwe ibe ukushisa. izinsimbi yethu ungakwazi ukumelana okushisa aphezulu nokuqinisekisa ukuphatha okunokwethenjelwa ezishisayo ngaphakathi ohlelweni-X-ray.
n emkhakheni radiotherapy thina ukusiza nokuvulwa amashumi ezinkulungwane iziguli. Lapha, ngokunemba ngokuphelele futhi izinga okuqinile kubalulekile. multileaf yethu collimators futhi shieldings owenziwe ikakhulukazi obukhulu tungsten-esindayo metal ingxubevange Densimet® abaphambuki a milimitha kusukela kule inhloso. Bona ukuqinisekisa ukuthi emisebeni useyakwazi ngendlela bona liwela phezu izicubu onesifo ngokunemba ukukhomba. Izimila bavezwa ephezulu ukucacisa ngemisebe kuyilapho izicubu onempilo uhlala ezivikelwe.
Uma kuziwa inhlalakahle yomuntu, sithanda ukuba ngokuphelele. ukukhiqizwa chain yethu kungaqali nge ukuthengwa kwensimbi kodwa wokwehla impahla eluhlaza ukwakha powder metal. Kuphela ngale ndlela sifeze ubumsulwa okusezingeni eliphezulu impahla ephawula imikhiqizo yethu. Thina akhiqize compact izingxenye metallic kusukela ukungena nakwamanye amazwe powder izikhala. Ukusebenzisa ekhethekile izinqubo ekuqeqesheni nasekuqondiseni mechanical ukucutshungulwa izinyathelo, kanye state-of-the-art enamathela nokujoyina ubuchwepheshe, siphendukela lezi zibe izingxenye eziyinkimbinkimbi esiphezulu performanceand ngemfanelo evelele.
molybdenum Plate, molybdenum Ishidi, molybdenum Rod, molybdenum, Tzm Sheet, Tzm Plate,